I-china i-melt iqhuma abakhiqizi bomugqa we-extrusion nabaphakeli | Imishini Yokuceba
Umugqa we-PP Melt oshaywe ngomshini we-extrusion: Umklamo womshini ngesikulufa esisodwa se-extruder eyinhloko, nokushisa nokuncibilikisa i-PP, bese ujova isikhunta, uthathe umoya ophakeme, (umoya udinga ukushisa kwangaphambili), ukushaya isakhiwo se-filamentary, ukwelashwa kamuva ngu electrostatic
Umugqa we-PP Melt oshaywe ngomshini we-extrusion: Umklamo womshini ngesikulufa esisodwa se-extruder eyinhloko, nokushisa nokuncibilikisa i-PP, bese ujova isikhunta, uthathe umoya ophakeme, (umoya udinga ukushisa kwangaphambili), ukushaya isakhiwo se-filamentary, ukwelashwa kamuva nge-electrostatic, roller, slitting device winder, ekugcineni ama-pp angenalukiwe angafika ebangeni lama-95. ibanzi ekusebenziseni imaski ukuvikela okokusebenza, izinto zokwelashwa, ukusula impahla njalonjalo ...
Singahlinzeka ngomshini ngosayizi we-PP oncibilikile osuselwa ku-200mm 320mm 600mm 800mm 1200mm 1600mm 2400mm. Izingxenye eziyinhloko zomshini we-PP melt isikhunta, sikhetha i-china engcono kakhulu yomkhiqizo. Okunye okubalulekile ukuhlola, indoda enhle yokuhlola, kungonga izindleko eziningi kanye nama-times.special ngokulawula ukushisa. Lapha singakunika konke ukusikisela komshini we-PP oncibilikisiwe.form A to Z.
okuluhlaza okotshani: ukuncibilika kwe-PPGSM: 10-115g / m3
Idivayisi yokudla isebenzisa ubuchwepheshe obuhlukile benkampani, obungasiza ekuxubeni kwezinto ezixubile futhi baphoqele ukondliwa kwe-screw screw extruder eyodwa ukwenza ngcono ukusebenza kahle nekhwalithi yegranulation;
Kokubili isikulufa sesigaxa esiphindwe kabili kanye nesikulufa esisodwa kuqhutshwa ubuchwepheshe bokuguqula imvamisa ye-AC, engakwazi ukuzivumelanisa nezidingo ezahlukahlukene zobuchwepheshe;
Ingaphambili lekhanda lomshini lamukela umshini wokubacindezela oshintsha ngokushesha, osindisa isikhathi nomzamo futhi ulungele imvelo;
I-granulator isebenzisa ikhanda lokusika elijikelezayo nedivayisi yokuhlela kahle i-granulation eshisayo epholile emoyeni;
Ukupholisa kwama-pellets kusebenzisa isihlukanisi se-cyclone ukuhambisa kanye ne-drum cooler noma i-disc vibrating screen;
Uhlelo lokulawula ugesi lwamukela i-PLC, isikhombimsebenzisi esibonakalayo nobuchwepheshe bokuguqula imvamisa ukuze kufinyelele inqubo ephelele yokulawula okuzenzakalelayo.